Kiss Me Again သည် Fon Sananthachat၊ March Chutavuth၊ Thanaerng Kanyawee၊ Mond Tanutchai၊ New Thitipoom၊ Tay Tawan၊ Pango Jintanutda နှင့် Earth Pirapat တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည့် ၂၀၁၈ ထိုင်းဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ပုဒ် ဖြစ်သည်။ ဒါရိုက်တာ ဝီရစိတ္တ ထောင်ဇီလ ...
Lovely Writer: The Series သည် Noppakao Dechaphatthanakun နှင့် Poompat Iam-samang တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည့် ၂၀၂၁ ထိုင်းဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ပုဒ် ဖြစ်သည်။ ဒါရိုက်တာ Bundit Sintanaparadee ရိုက်ကူးပြီး Good Feeling နှင့် Dee Tuk Wan 2019 တို့က Dee Hup နှ ...
Mint To Be သည် Perawat Sangpotirat နှင့် Worranit Thawornwong တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည့် ၂၀၁၈ ထိုင်းဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ပုဒ် ဖြစ်သည်။ ဒါရိုက်တာ Kanittha Kwunyoo ရိုက်ကူးပြီး GMMTV နှင့် Baa-Ram-Ewe တို့ ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်သည့် ဤဇာတ်လမ်းတွဲသည် ၂၀၁၈ ဖေဖော ...
My Dear Loser သည် Edge of 17 ၊ Monster Romance နှင့် Happy Ever After ဟူသော အပိုင်းခွဲ သုံးပိုင်း ပါဝင်သည့် ၂၀၁၇–၂၀၁၈ ထိုင်းဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ပုဒ် ဖြစ်သည်။ ဒါရိုက်တာ Chatkaew Susiwa ရိုက်ကူးပြီး GMMTV က ထုတ်လုပ်သော ဤ သုံးပိုင်းတွဲ ဇာတ်ကားသည် ၂၀၁၇ မတ် ...
Our Skyy သည် Off Jumpol နှင့် Gun Atthaphan၊ Pluem Purim နှင့် Chimon Wachirawit၊ Frank Thanatsaran နှင့် Drake Sattabut၊ Tay Tawan နှင့် New Thitipoom၊ Krist Perawat နှင့် Singto Prachaya တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည့် ၂၀၁၈ ထိုင်းဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ပုဒ် ...
Secret Seven သည် မင်းသမီး Punpun Sutatta နှင့် Kang Vorakorn၊ Tay Tawan၊ Oab၊ Lee Thanat၊ Mek Jirakit၊ Gun Atthaphan၊ Captain Chonlathorn ဟူသော မင်းသားခုနစ်လက်တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည့် ၂၀၁၇ ထိုင်း ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ ဖြစ်သည်။ ဒါရိုက်တာ Nuttapong ...
Senior Secret Love သည် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ထုတ်လွှင့်ခဲ့​သော ထိုင်းရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်သည်။ ဤဇာတ်လမ်းတွဲတွင် My Lil Boy ၊ Puppy Honey နှင့် Bake Me Love ဟူသောအမည်များဖြင့် အပိုင်းခွဲသုံးပိုင်းပါဝင်သည်။ ဒါရိုက်တာ Weerachit Thongjila ရိုက်ကူးပြီး ...
SOTUS S: The Series သည် Perawat Sangpotirat နှင့် Prachaya Ruangroj တို့ပါဝင်သရုပ်​ဆောင်ထားသည့် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ တွင်ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့​သော ထိုင်းရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ဤဇာတ်လမ်းသည် Bittersweet၏ အမည်တူဝတ္ထုကို အ​ခြေခံကာရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါ ...
SOTUS: The Series သည် Perawat Sangpotirat နှင့် Prachaya Ruangroj တို့ ပါဝင်သရုပ်​ဆောင်ထား​သည့် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ထုတ်လွှင့်ခဲ့​သော ထိုင်းရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ Bittersweet ၏ SOTUS: พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง ဝတ္ထုကို အ​ခြေခံကာ ရိုက် ...
Still 2gether คู่กัน ; RTGS: Phro Rao Khu Kan, lit. ငါတို့ အတူတူ ရှိနေလို့ပဲ) သည် 2gether: The Series ၏ နောက်ဆက်တွဲဇာတ်လမ်း ဖြစ်ပြီး Win Metawin နှင့် Bright Vachirawit တို့ အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည့် ၂၀၂၀ ထိုင်းဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ပုဒ် ဖြစ်သည်။ ဒါရိုက ...
Water Boyy: The Series သည် အမည်တူ ရုပ်ရှင် Waterboyy ကို ဇာတ်လမ်းတွဲအဖြစ် ပြန်လည်ရိုက်ကူးပုံဖော်သည့် ၂၀၁၇ ထိုင်း ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ တစ်ပုဒ်ဖြစ်ပြီး၊ Earth Pirapat၊ New Thitipoom၊ White Nawat၊ Piglet Charada၊ Victor Chatchawit၊ Fon Sananthachat တို ...
ကိုယ့်နံဘေးက နတ်မိမယ် သည် Krissanapoom Pibulsonggram နှင့် Ramida Jiranorraphat တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည့် ၂၀၂၀ ထိုင်းဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ပုဒ် ဖြစ်သည်။ ဒါရိုက်တာ Chatkaew Susiwa ရိုက်ကူးပြီး GMMTV က ထုတ်လုပ်သော ဤဇာတ်လမ်းတွဲသည် ၂၀၁၈ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၅ရက် ...
ကြယ်တစ်ထောင်ပုံပြင် သည် Earth Pirapat နှင့် Mix Sahapap တို့ အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည့် ၂၀၂၁ ထိုင်းရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ပုဒ် ဖြစ်သည်။ ဒါရိုက်တာ အောက်ဖ် နိုပ္ဖာရနစ္ဆ ရိုက်ကူးပြီး GMMTV က ထုတ်လုပ်သည့် ဤဇာတ်ကားသည် ၂၀၁၉ အောက်တိုဘာ ၁၅၌ ကြေညာခဲ့သည့် New ...
ဆယ်ကျော်သက် မေမေ: သည် စီးရီး သည် Perawat Sangpotirat နှင့် Ramida Jiranorraphat တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည့် ၂၀၁၇ ထိုင်း ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်သည်။ ဒါရိုက်တာ ဝီရစိတ္တ ထောင်ဇီလ ရိုက်ကူးပြီး GMMTV နှင့် Housestories 8 တို့ ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်သည့် ဤ ဇာတ ...
နင် ဘယ်သူလဲ သည် Tipnaree Weerawatnodom ၊ Perawat Sangpotirat နှင့် Kay Lertsittichai တို့ ပါဝင်သရုပ်​ဆောင်​ထားသော ၂၀၂၀ခုနှစ် ထိုင်းရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ပုဒ် ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၅ခုနှစ် က ထွက်ရှိခဲ့သည့် တောင်ကိုရီးယား ဇာတ်လမ်းတွဲ Who Are You: School 2015 က ...
ဘယ်လှည့်ညာလှည့် သည် ထိုင်ဝမ်စာ​ရေးဆရာ Jimmy Liao ၏ Turn Left, Turn Right ရုပ်ပြစာအုပ်ကို ပုံဖော်ရိုက်ကူးထားပြီး၊ Kawee Tanjararak ၊ Prachaya Ruangroj ၊ Korapat Kirdpan ၊ Ornjira Lamwilai ၊ Chayanit Chansangavej နှင့် Napasorn Weerayuttvilai တို့ ...
ဘလက်လစ်တ် သည် Korapat Kirdpan ၊ Wachirawit Ruangwiwat ၊ Pawat Chittsawangdee ၊ Sattabut Laedeke ၊ Kanaphan Puitrakul ၊ Thanatsaran Samthonglai နှင့် Preeti Barameeanant တို့ပါဝင်သရုပ်​ဆောင်ထား​သော ၂၀၁၉ ထိုင်းရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ တစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ဒါရိ ...
ဘေးခန်းက ကောင်မလေး သည် Worranit Thawornwong ၊ Pathompong Reonchaidee ၊ Juthapich Indrajundra ၊ Prachaya Ruangroj ၊ Lapassalan Jiravechsoontornkul ၊ Jumpol Adulkittiporn ၊ Sarocha Burintr နှင့် Jirayu La-ongmanee တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော ၂၀၂၀ ထိ ...
မင်းက ငါ့ကောင်လေးမို့ သည် Sattabut Laedeke နှင့် Thanatsaran Samthonglai တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည့် ၂၀၁၈ ထိုင်းဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ပုဒ် ဖြစ်သည်။ ဒါရိုက်တာ ရာရှစ် ကုသောကုလသီရိ ရိုက်ကူးပြီး GMMTV က COSOCOMO နှင့် ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်သော ဤဇာတ်ကားသည် ၂၀၁၈၊ ဖ ...
သူငယ်ချင်းစည်း သည် Thanat Lowkhunsombat ၊ Nichaphat Chatchaipholrat ၊ Prachaya Ruangroj ၊ Pronpiphat Pattanasettanon ၊ Nat Sakdatorn၊ Tipnaree Weerawatnodom ၊ Ratthanant Janyajirawong ၊ Nathasit Kotimanuswanich နှင့် Sarunchana Apisamaimongkol တိ ...
သူငယ်ချင်းစည်း ၂: အန္တရာယ်တော သည် Nichaphat Chatchaipholrat ၊ Tipnaree Weerawatnodom ၊ Thanat Lowkhunsombat ၊ Prachaya Ruangroj ၊ Nat Sakdatorn၊ Pronpiphat Pattanasettanon ၊ Weerayut Chansook ၊ Nathasit Kotimanuswanich ၊ Way-Ar Sangngern ၊ Sarunc ...
အချစ်သီအိုရီ သည် Gun Atthaphan နှင့် Off Jumpol တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည့် ၂၀၁၉ ထိုင်းဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ပုဒ် ဖြစ်သည်။ ဒါရိုက်တာ Nuttapong Mongkolsawas ရိုက်ကူးပြီး GMMTV က ထုတ်လုပ်သော ဤဇာတ်လမ်းတွဲသည် ၂၀၁၈ နိုဝင်ဘာ ၅ရက်က ပြုလုပ်သော "Wonder Th13teen" ...
အပြာရင့်ရင့် အနမ်း သည် Tay Tawan၊ New Thitipoom၊ Pod Suphakorn၊ Gawin Caskey နှင့် Chayapol Jutamat တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည့် ၂၀၁၉ ထိုင်းဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ပုဒ် ဖြစ်သည်။ ဒါရိုက်တာ အောက်ဖ် နိုပ္ဖာရနစ္ဆ ရိုက်ကူးပြီး GMMTV က ထုတ်လုပ်သော ဤ ဇာတ်ကားသည် ၂၀ ...
အမျိုးသမီးတို့ ထကြလော့: သည် စီးရီး သည် Niti Chaichitathorn ၊ Akhamsiri Suwanasuk ၊ Apissada Kreurkongka, Maneerat Kam-Uan နှင့် Tipnaree Weerawatnodom တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထား​သော ၂၀၁၈ ထိုင်းရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ တစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ GMMTV နှင့် Parbdee Ta ...
အမျိုးသမီးတို့ ထကြလော့: အလွန်ရှုပ်ထွေးပွေလီသော သည် အမျိုးသမီးတို့ ထကြလော့: သည် စီးရီး ၏ နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် Niti Chaichitathorn ၊ Akhamsiri Suwanasuk ၊ Apissada Kreurkongka ၊ Maneerat Kam-Uan ၊ Tipnaree Weerawatnodom နှင့် Ramida Jiranorraphat တို့ ...
၃ ယောက်သာ လွတ်မြောက်မည် သည် Lapassalan Jiravechsoontornkul ၊ Way-Ar Sangngern နှင့် Tawan Vihokratana တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထား​သော ၂၀၁၉ခုနှစ် ထိုင်းရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ဒါရိုက်တာ Tidakorn Pookaothong ရိုက်ကူးပြီး GMMTV နှင့် Trasher Ban ...
လူးရှမ်း သို့မဟုတ် တိုင်လူး၊ တိုင်လီူး၊ တိုင်လူး ၊ တိုင်လီ၊ သိပ်သောင်ဗန်န_ဆစ်ဆောင်ပန်န ဒိုင် စကားသည် အရှေ့တောင်အာရှတွင် လူဦးရေ ၇၀၀,၀၀၀ ခန့် ပြောဆိုကြပြီ လူးရှမ်း ဘာသာစကားသည် တိုင်အနွယ်ဝင်ဘာသာစကား ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းဘာသာစကားပြောဆိုသူများ စုစုပေါင်းအရေ ...
မော်ကယ်ဘာသာစကား သည် မြန်မာနိုင်ငံ ကမ်းရိုးတန်းဒေသနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့တွင် နေထိုင်ကြသော ဆလုံလူမျိုးများ ပြောဆိုအသုံးပြုကြသော ဘာသာစကားတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ဤဘာသာစကားသည် မလေးယို-ဆမ်ဘာဝမ် ဘာသာစကားများမှ ကွဲထွက်လာသော ဘာသာစကားဖြစ်ပြီး မွန်-ခမာ ဘာသာစကားများ ...
မောင်း သို့မဟုတ် မောင် တရုတ်နိုင်ငံတွင် မြောင်းဟု သိကြသည်။ ဤစကားမျိုးဆက်သည် အနောက်မောင်းဘာသာစကားအနွယ်၏အခွဲ မောင်းဘာသာစကားကိုပြောဆိုကြပါသည်။ မောင်းစကားကို စီချွမ်, ယူနန်, ကွေးဂျိုး, ကွမ်းရှီး, ဟိုင်နန် ဗီယက်နမ် မြောက်ပိုင်း၊ ထိုင်း နှင့် လာအိုနိုင ...
အီသန် အရှေ့မြောက်ထိုင်း မဲခေါင်မြစ်ပေါ်ရှိ လာအိုစကားပြောကမ္ဘာ၏နိုင်ငံရေးပြိုကွဲအပြီးတွင်ဘယ်ဘက်ကမ်းခြေသည်ခေတ်သစ်လာအိုနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ Isan ဒေသ ဖြစ်လာသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံရှိ လာအိုဘာသာစကား ၏ဒေသဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုရည်ညွှန်းသည်။ ၁၈၉၈ ဖရန့်စ ...
The Motherland Calls သည် ရုရှားနိုင်ငံ၊ ဗော်ဂါဂရတ်မြို့၊ Mamayev Kurgan တွင်တည်ရှိသည့် ရုပ်တုတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ၎င်းရုပ်တုကို ပန်းပုဆရာ Yevgeny Vuchetich က ဒီဇိုင်းဆွဲခဲ့သည်။ တည်ဆောက်မှု အင်ဂျင်နီယာမှာ နိခိုလိုင် နိခိတင် ဖြစ်သည်။ ၁၉၆၇ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘ ...
တျန်ကွမ်ကာ သည် ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ၏ အမျိုးသားနိုင်ငံတော်သီချင်း ဖြစ်ကာ ၁၉၄၄ခုနှစ်တွင် ဗန်ကွန်း မှ ရေးစပ်သီကုံခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၁၉၄၅ခုနှစ်တွင် မြောက်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတော်သီချင်း အဖြစ် လည်းကောင်း ၊ ၁၉၇၅ ခုနှစ် တောင်ဗီယက်နမ် နှင့် မြောက်ဗီယ ...
ကမ္ဘာမကျေ သည် မြန်မာနိုင်ငံတော်သီချင်းဖြစ်သည်။ သီချင်း၏ အစပိုင်းအား မြန်မာ ရိုးရာသံစဉ်ဖြင့် တီးခတ်ထားခဲ့သည်။ ထို့နောက် အနောက်တိုင်း ဂီတသံစဉ်သို့ ပြောင်းလဲ တီးခတ်ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဤသီချင်းစာသား၊ သံစဉ်များကို ဝိုင်အမ်ဘီ ဆရာတင်ခေါ် သခင်တင် ရေးစပ်သ ...
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ် သည် နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏လုပ်ငန်းဆိုင်ရာများတွင်အသုံးပြုသောတံဆိပ်ဖြစ်သည်။နိုင်ငံ​တော်အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်ကို ယင်း၏ဂုဏ်ကျက်သ​ရေနှင့်အညီ နည်းလမ်းတကျအသုံးပြုရန်နှင့် ထိန်းသိမ်း​စောင့်​ရှောက်ကြရန်အလို့ငှာ ...
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အလံတော် သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ကို ကိုယ်စားပြုသော အလံတော်ဖြစ်သည်။လက်ရှိအသုံးပြုနေသော အလံတော်ကို ၂၀၁၀ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ၂၁ရက်နေ့တွင် စတင်အသုံးပြုခဲ့သည်။
ဂင်္ဂါမြစ် သည် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် အထက် ပေပေါင်း ၁၀၄၀၀ ကျော်မြင့်သော ဟိမဝန္တာ တောင်တန်းများရှိ ရေခဲဂူကြီးတစ်ခုအတွင်းမှ စတင်မြစ်ဖျားခံပြီး တောတောင်အထပ်ထပ်ကို ကျော်လွန်ကာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ကျယ်ပြန့်သော လွင်ပြင်ကြီးများကို ဖြတ်သန်းစီးဆင်းသည့် မြစ်တစ်စ ...
ညီညွတ်ရေးရုပ်တု သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်ရေးသူရဲကောင်း ဆာဒါဘာလာဘာဘိုင်ပတေး ၏ ရုပ်တု ဖြစ်သည်။ ရုပ်တုသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ နာမဒခရိုင်တွင် တည်ရှိသည်။ အမြင့်သည် ၁၈၂ မီတာ ရှိပြီး ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးရုပ်တု ဖြစ်သည်။ ဘာလာဘာဘိုင်ပတေးသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ လွတ်လပ ...
ဒွန်ရှမ်း ဟုလည်းလူသိများသော ဗီယက်နမ် မြောက်ပိုင်း၊ လာအို နှင့် တရုတ်တို့တွင်နေထိုင်ကြပြီး တိုင်ဘာသာစကားများ ကို ပြောဆိုကြသည် ။
ပါဠိ ဟူသည် အိန္ဒိယတိုက်ငယ်အတွင်းရှိ တိုင်းရင်းလူမျိုးတို့၏ မိခင်ဘာသာစကားတစ်မျိုးဖြစ်၏။ ဤဘာသာစကားကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လေ့လာမှုပြုကြရာအကြောင်းအရင်းခံမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ အဖိုးတန်စာပေများဖြစ်သော ပိဋကတ်သုံးပုံကို ပါဠိဘာသာဖြင့် စုဆောင်းသိမ်းဆည်းထားမှတ်တမ်း ...
ရှိုဘာသာစကား သည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတို့တွင် ပြောဆိုကြသော ကူကီး ဒေသိယစကား ဖြစ်သည်။ ရှိုဘာသာစကားတွင် ထင်ရှားသော ဒေသိယစကား လေးမျိုးရှိနိုင်ပြီး ယင်းတို့မှာ အရှို၊ ဘွာလ်ခွာ၊ ချင်းပုံ နှင့် Shendu တို့ ဖြစ်သည်။ Mayin and Longpaw ...
သက္ကမဘာသာစကား သက်လူမျိုး နှင့် ဒိုင်းနက်လူမျိုး များ ပြောဆိုသည့် အင်ဒို-အာရိယာန် ဘာသာစကား တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းနှင့် အနီးစပ်သော ထင်ရှားသည့် ဘာသာစကားများမှာ အာသံဘာသာစကား၊ Hajong ဘာသာစကား၊ ဘင်ဂါလီဘာသာစကား၊ စစ်တကောင်းဘာသာစကား၊ မဏိပူရ၏ Bishnupriya Manip ...
သက်ဘာသာစကားကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွင် လူဦးရေ ၃,၀၀၀ ခန့်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် လူဦးရေ ၁,၀၀၀ ခန့်က ပြောဆိုအသုံးပြုကြသည်ဟု Ethnologue တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် မောင်တောမြို့နယ်၊ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်၊ ရသေ့တောင်မြို့နယ်နှင ...
အမျိုးသားပြတိုက် သည် ဘရာဇီးနိုင်ငံရှိ သက်တမ်းအရင့်ဆုံး သိပ္ပံဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး အမေရိကတိုက်တွင် မနုဿဗေဒ နှင့် သဘာဝသမိုင်းဆိုင်ရာ ပြတိုက်များတွင် အကြီးဆုံး ဖြစ်သည်။ ပြတိုက်သည် ရီယို ဒီ ဂျီးနေးရိုးမြို့တွင် တည်ရှိသော Quinta da Boa Vista တွင ...
၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့တွင် ဘရာဇီးနိုင်ငံ၊ ရီယို ဒီ ဂျီးနေးရိုးမြို့ရှိ ဘရာဇီး အမျိုးသားပြတိုက်အဖြစ် ဖွင့်လှစ်ထားသော Paço de São Cristóvão အဆောက်အအုံတွင် မီးလောင်ကျွမ်းမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အဆိုပါပြတိုက်တွင် ပစ္စည်းပေါင်း သန်း ၂၀ ကျော် ထိန်း ...
ကင်ပွန်းတပ် မင်္ဂလာမှာ မွေးစကလေးကို ကင်ပွန်းရည်၊တရော်ရည် စသည်တို့ဖြင့် ဦးခေါင်းဆေးခြင်း အခမ်းအနားကို ခေါ်ဆိုသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် မွေးစကလေးအား ဝမ်းတွင်း ဆံပင်ရိတ်ပေးသော မင်္ဂလာပွဲဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် ကင်ပွန်းတပ် မင်္ဂလာသည် ‘ကေသစ္ဆေဒန မင်္ဂလာ’ ဖြစ်သ ...
ကရင်အမျိုးသားနှစ်သစ်ကူးနေ့ အသိအမှတ်ပြုခြင်း ဥပဒေကြမ်းကို ထုတ်ပြန်လိုအပ်လျှက်ရှိသည်။ ဤသို့သော အကြောင်းကြောင့် အောက်ပါအတိုင်း ပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပါသည်။ ၁။ အမည် ။ အကျယ်အဝန်းနှင့် စတင် အာဏာတည်သောနေ့။ ၁ ဤဥပဒေကို ကရင်အမျိုးသားများ နှစ်သစ်ကူးနေ့ အသိအမှတ်ပြခြ ...
ရခိုင်အရေးအသားများဖြစ်၍ မြန်မာလို စီလျော်အောင် ပြင်ပေးစေခြင်သည်။ ပြိုင်လောင်းဟုပြောလျှင် အကျွန်ုပ်ရို့ရခိုင်သားများ ရီကိုပြီးမြင်ကတ်လိမ့်မည်။ အခု အကျွန်ရွီးမည့်ပြိုင်လောင်းအကြောင်းသည် ရီတွင်ပြိုင်ခြင်းမဟုတ်၊ ကုန်ထက်တွင် ထူးထူးဆန်းဆန်း ပြိုင်ခြင်း ...
ကျောက်ပျဉ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမျိုးသမီးများ အမွှေး နံ့သာ လိမ်းကျံရာ၌ နံ့သာသွေးရာ ကျောက်ချပ်ပြားဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့် မြန်မာအမျိုးသမီးများသည် သနပ်ခါးကို လိမ်းကျံခြယ်သလေ့ ရှိကြသဖြင့် သနပ်ခါးအများဆုံး သွေးရာ ကျောက်ပြားဖြစ်၍ သနပ်ခါးကျောက်ပျဉ်ဟု ...
ကျောက်မြင်းကြီးလေးကောင် သည် ကသာခရိုင်၊ အင်းတော်မြို့နယ်၊ မန်လည်ရွာရှိ မန်လည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ပျံလွန်တော်မူရာ မန်လည်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် တည်ရှိသည်။ ယခင်က ကျောက်မြင်းကြီးလေးကောင်မှာ အရှေ့၊ အနောက်၊ တောင်၊ မြောက် အရပ်လေးမျက်နှာသို့ မျက်နှာမူပြီး ...
မင်းကျော်စွာနတ် နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျော်စွာ ဦးရှိနေသည်။ ပုဂံ သိန်းခွန်၏ သား ပုဂံ တရုတ်ပြေးမင်း၏ သား၊ အလောင်းစည်သူမင်း ၄ရ၄-၅၂၉ ၏ အမတ်တစ်ဦး၊ ပုပ္ပါး အရက်သည်မ ရိုက်သတ်၍ အနိစ္စရောက်ခဲ့သူ ကျော်စွာ၊ အင်းဝခေတ် ငါးစီးရှင်၏ သား ကျော်စွာ၊ အင်းဝ ပထမ မင်းခေါင် ခ ...